Santa Barbara သို့ဆုတောင်းပါ။ ? ငွေ၊ အချစ်နှင့်ကာကွယ်မှုအတွက်
Santa Barbara သို့ဆုတောင်းပါ။ Santa Barbara ရှိအခြားအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမုန်းတီးခြင်းကိုသူမမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေးစားမှုကိုခံယူထိုက်သည်။ တစ်ခုထ Santa Barbara ကိုဆုတောင်းလိုက်သည် ၎င်းသည်ကိစ္စများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးနေသောသူများအတွက်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်။
နာကျင်မှုဝေဒနာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကမ္ဘာမြေကြီး၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်စစ်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ သူ၏ရန်သူရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်သူမသည်သစ္စာရှိသူတော်စင်များထံကတိထားရာတော်၏သရဖူသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့သည်စိတ်နှလုံးနှင့်တိုက်ခိုက်ကြသည်။
1 Santa Barbara သို့ဆုတောင်းပါ
1.2 ဆုတောင်းခြင်း Santa Barbara သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်
သူ၏မိသားစုဘ ၀ ၌သူသည်သူ၏မိသားစုယုံကြည်သူများကိုဆန့်ကျင်။ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများကြောင့်များစွာဒုက္ခရောက်ခဲ့သည်။ သူ့အဖေကထိုအချိန်ကဘာဘရာတွင်လွတ်လပ်စွာဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ရန်သူဖြစ်သည်ဟုသမိုင်းကဆိုသည်။
သူဟာသူ့အဖေ Dioscoro ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ဘာသာရေးကွဲပြားမှုကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေဖြင့်သူမကိုအလွန်မြင့်မားသောမျှော်စင်တစ်ခုတွင်သော့ခတ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာသူကပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် မျှော်စင် တစ် ဦး တည်းသာပြတင်းပေါက်ရှိခဲ့သူမကသင်္ကေတအဖြစ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပွင့်လင်းအမိန့်ပေးခဲ့သည် ဘုရားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ.
သူမ၏ဖခင်ပြန်ရောက်လာသောအခါသူမကသူမကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းနှင့်အရှက်ရစေခဲ့သည်။ Dioscoro ကိုယ်တိုင်သူမ၏ခေါင်းကိုတောင်ထိပ်ပေါ်တွင်သူ၏ဓားဖြင့်ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ဒီလူသတ်မှုပြီးတဲ့နောက်ကောင်းကင်ကရောင်ခြည်တစ်ခုကသူ့ကိုရိုက်ပြီးသူ့အသက်ကိုသတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။
အင်အားကြီးသော Santa Barbara, တိုက်လေယာဉ်တစ် ဦး, ငါ့ကိုဒီစစ်တိုက်အနိုင်ရကူညီပေးပါ။
ဒုစရိုက်အပြစ်၏သွေးဆောင်ရာသို့မကျရောက်သောသင်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုခံယူသူ၊ ငါတို့သခင်ဘုရားကိုတောင်းပန်ပါ၊ သူသည်ကျွန်ုပ်အားဤစမ်းသပ်မှုကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးပါရန်တောင်းပန်ပါ၏။
သူကသူ့သြဂုတ်လတည်းခိုရာမှငါ့ကိုပေးပါ အင်အား ကောင်းသောဆုရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဘယ်မှာအလုံအလောက်။
သခင်ယေရှု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်သင်၏သွေးဖြူဥနှင့်အတူသင်၏အပျိုစင်အပျိုစင်ကိုဆေးကြောပေးခဲ့သည့်ဘရာဘာဘာသည်မုန်တိုင်းများ၊ မီးလောင်မှုများ၊ ကပ်ဘေးများနှင့်ဤကမ္ဘာ၏ဘေးဆိုးများမှကျွန်ုပ်ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ကိုကယ်ပါ သေခြင်း ရုတ်တရက် ကျွန်ုပ်အသက်တာ၌သာယာဝပြောမှုရရှိရန်၊ သန့်ရှင်းသောမိတ်ဆွေအဖြစ်နေထိုင်ရန်နှင့်ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏နေ့ရက်များကုန်ဆုံးချိန်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ပါ။
သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်အပေါ်မှီခိုရန်၊ သူမ၏ကတိတော်များပြည့်စုံသည်ဟုယုံကြည်ရန်နှင့်များစွာနှင့်အနည်းငယ်သာအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သူမ သူကိုဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုခံစားခဲ့ရသည် ယင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
အဲဒီမှာ ပဌနာသို့မဟုတ်ဆုတောင်းပဌနာ နည်းမှန်လမ်းကျမေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်ကိုနားထောင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရမည့်အရေးကြီးသောအရာနှင့်တစ်ခုတည်းသောအာမခံချက်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုရှင်သန်စေရန်ဖြစ်သည်။
ဆုတောင်းခြင်း Santa Barbara သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်
စစ်သူရဲကောင်းစိန့်ဘာဘရာကိုကောင်းချီး ပေး၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်။
ဘယ်သူမှသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုလမ်းရရှိသွားတဲ့နိုင်အောင်, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၌စုစည်း, သူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်။ မင်္ဂလာရှိသောစိန့်ဘာဘရာ၏ဆံပင်ကိုဘိသိက်ပေးသည် (အမည်များကိုပြန်လုပ်ပါ) သင်၏ရေငတ်ခြင်းအားဖြင့်ရေကိုသောက်လော့ infinito သင်၏ထာဝရစိတ်ဆန္ဒများကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းကထာဝရတည်မြဲသောချစ်သူများကိုကာကွယ်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ရန်ပွဲကိုအားကောင်းစေသည် (သင်၏နာမည်နှင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများ၏နာမည်ကိုထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြပါ).
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ၀ မ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ၀ မ်းနည်းခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အချိန်အစ မှစ၍ ယနေ့တိုင်အသုံးများဆုံးဖြစ်သည်။
စန်တာဘာဘရာ၏ဖခင်ဖြစ်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသူ၏သမီးကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူ၏သမီးကိုခေါင်းဖြတ်သတ်သကဲ့သို့ပြုမူမှုပြုရန်သူအား ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
ကောင်းမြတ်သောအပျိုကညာ၊ ကောင်းမြတ်သောအပျိုကညာဖြစ်သောစိန့်ဘာဘရာ၊ ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေ။
အနိုင်ရတဲ့ဓားနဲ့ဆိုးညစ်မှု၊ မတရားမှု၊ မနာလိုမှု၊ ရန်သူများလက်မှငါ့ကိုကာကွယ်ပါ၊ အမြောက်များဖြင့်မီး တင်၍ အောင်နိုင်ပါစေ။
ကျွန်ုပ်၏ပန်းသီးနှင့်လုပ်ပေးရမည့်အလုပ်များကိုကျွန်ုပ်၏အတွေးများနှင့်အိမ်တွင်အမြဲမှတ်မိနေသည့်အရာတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်း၊ ငါ့မြေ၊ ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုခုခံကာကွယ်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှမထားခဲ့ပါနှင့် ရုန်းကန်မှုများ၊ ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမင်းကမင်းလိုမင်းကိုဂုဏ်တင်ဖို့အမြဲတမ်းခေါ်သွားတယ်။
Santa Barbara အားကာကွယ်ရန်အတွက်မင်္ဂလာရှိသောဘာဘရာအတွက်ဤသည်မှာဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
စန်တာဘာဘရာမှဒုက္ခရောက်ချိန်တွင်မိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး အားကာကွယ်ရန်တောင်းဆိုသောအခါ၎င်းသည်ထိရောက်လာသည်။ သစ္စာရှိယုံကြည်သူများ၏သက်သေခံချက်များစွာရှိသည်။
သူတို့ကိုငါရှုပ်ထွေးစေရန်၊ သူတို့ကိုငါနှင့်ခွဲခွာရန်သူတို့သည်သင်တို့ကို Santa Santa သို့ငါလာသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအန္တရာယ်မပြုနိုင်ရန်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အော်ဟစ်။ သင့်ဘဝကိုပေးဆပ်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်၊ လူသားများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူ၊ သင့်ကိုစော်ကားသူ၊ ကောင်းမြတ်သောသတ္တဝါများအတွက်သင်၏ရင်ဘတ်ကိုဖွင့်ပေးသောခွန်အားကြီးသောခရစ်ယာန်၏ကောင်းချီးခံစားရသူ၊ ကျွန်ုပ်အားသင်၏အကူအညီကိုပေးပါ။ ကျွန်ုပ်ထဲဝင်ပါ။ သင်၏နှလုံးအသွေးဖြင့်ငါထွက်လာလိမ့်မည်။ ။
ငါ့ကိုရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း၊ သစ္စာပျက်ခြင်းကိုပယ်ရှားကြပါ။ ငါ၌မကောင်းသောအမှုအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းငှါစောင့်မတော်မူမည်အကြောင်းကိုငါတောင်းပန်ပါ၏။ ငါ့ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားလိုချင်တဲ့သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုရင်ငါ့ကိုထိခိုက်စေတဲ့ဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုငါနိုင်မှာပါ။
မကောင်းမှုအားလုံးမှကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိသောကျွန်ုပ်ကိုသန့်ရှင်းသောဘာဘရာမှကယ်တင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရန်သူအားလုံးမှကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိသောကျွန်ုပ်၏သန့်ရှင်းသောဘာဘရာအားလွတ်မြောက်စေပါ။ ကျွန်ုပ်၏ငြိမ်သက်ခြင်း၊ သခင်ယေရှုနှင့်အပျိုစင်အတွက်။
ရန်သူအတွက်လွှမ်းမိုးသော Santa Barbara ဆုတောင်းချက်၏အားသာချက်ကိုယူပါ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှိသည် ရန်သူနှင့်ပင်ငါတို့၏အိမ်၌ရှိ၏။ Santa Barbara ၏သမိုင်းတွင်သူမ၏ဖခင်ကသူမကိုသတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
လူများစွာကိုပြန်လည်သင့်မြတ်အောင် လုပ်၍ ကျွန်ုပ်အတွက်မျက်နှာသာအနည်းငယ်ပေးသူ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာတွေ့ပြီး၊ နှလုံးသားကိုမြင့်မြတ်မှန်ကန်စေပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်တီးပေးနိုင်သော၊ စန်တာဘာဘရာကိုသင်မင်္ဂလာရှိသောပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ပြည့်စေနိုင်သည်။ စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်ကိုသိနိုင်ဖို့ဒီစွမ်းအားတွေအများကြီးရှိတဲ့ Santa Barbara မင်းကငါ့ကိုတောင်းပန်ပါ။ မင်းရဲ့ကောင်းချီးကိုခံနိုင်ဖို့ကျွန်မရဲ့တောင်းဆိုမှုကစန်တာကိုချစ်တယ်။ မုသားမပါဘဲစုံလင်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရနိုင်တယ်။ မင်းမှာသီလရှိတယ်၊ el Mundo ငါ့ဆီလာပြီးမင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံယူခွင့်ပေးပါ။ မင်းရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုမင်းဆီကနေနောက်တစ်ခေါက်ပို့ချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်ဝစေရန်၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်ဖြင့်အံ့ဖွယ်ရာ Santa Barbara ကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်ဘုရားသခင်ထံကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းချက်များသည်ကျွန်ုပ်အားချစ်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပိုမိုချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ကောင်းသောဆန္ဒများ၊ အရာရာကိုလုပ်နိုင်၊ ငါ့ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ်လာနိုင်တဲ့မင်းက Santa Barbara၊ ခြေလှမ်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ငါ့အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အောင်မြင်မှုအတွက်အောင်ပွဲခံပါ။ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊
ထိုသို့ဆုတောင်းခြင်းသည်နာကြည်းခြင်းသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ခြင်းခံရသည့်မာနထောင်လွှားခြင်းမှပြုလုပ်သောတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောလုပ်ရပ်ဟုထင်မြင်သူအချို့က ဆက်လက်၍ ဝေဖန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒါမမှန်ဘူး
တစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာသောအခြေအနေအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်ရန်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး၊ အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုလိုအပ်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုမရရှိနိုင်ခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။